Politika · Febroary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Febroary, 2019
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Febroary, 2019
Hetsik'ireo Makedoniàna Mpampanofa Vatana Mba Hitakiana Ny Tsy Hiheverana izany ho Heloka Bevava, ho Fanefitry ny Herisetra
Eoropa Afovoany & Atsinanana 28 Febroary 2019
Nandritra ny Andro Iraisam-pirenena hanoherana ny herisetra atao amin'ireo mpampanofa vatana, nidina andalam-be ireo Makedoniana mpampanofa vatana mba hitaky fomba fiasa ara-drariny sy araka ny maha-olona.
Voatsikera tao amin'ny media sosialy noho ny fomba fiakanjony ilay Breziliana vehivavy mpanao lalàna
Brezila 28 Febroary 2019
"Kely loatra ny fandraisan'ny vehivavy anjara eo amin'ny fiarahamonina hany ka ny akanjo mampiseho tratra avy no lasa miteraka olana goavana ."
Vorondolo Iray Mandà Tsy Mety Miala Ao Anatin'ny Parlemanta Tanzaniana. Inona Daholo No Dikan'izany?
Afrika Mainty 28 Febroary 2019
Nipoitra ny vorondolo, nandritra ny fanaovan-tsonia ilay fanitsiana naha-be resaka hametra ny feon'ny mpanohitra ao Tanzania. Mety ho finoanoam-poana milaza ny fahafatesan'ny demokrasia ao Tanzania ve ilay vorondolo?
Latsabato ‘Fitsipaham-pitokisana’ Nohamafisin'ny Fitsaràna ao Goiana
Karaiba 28 Febroary 2019
Ny 31 Janoary 2019, ny filoha mpisolo toerana ao amin'ny Fitsarana any Goiàna dia namoaka didy nanome rariny ny fifidianana fitsipaham-pitokisana nangatahan'ny fiaraha-mitanan'ny mpanohitra. Homanina ho amin'ny volana Martsa ireo fifidianana ny ho filoham-pirenena vaovao .
Bahrain: Miantso ny Fandroahana ireo Tia ny Mitovy Fananahana aminy ireo Solombavambahoaka
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Febroary 2019
Mivoaka amin'ny fahanginana dia mivoaka ny firenena ihany koa? Entin'i Ayesha Saldanha amintsika ny fanehoankevitr'ireo bilaogera momba ny fiadian'ireo solombavambahoaka Bahrainita hametrahana lalàna iray vaovao hanakanana ny fiarahan'olon-droa mitovy fananahana ao an-toerana sy handroahana ireo vahiny mpila ravinahitra ka tia ny mitovy fananahana aminy.
Koety: Mandria Am-piadanana ry Ahmad AlRubi'e
Mitomany ny fahalasanan'ilay avara-pianarana mpitarika sady mpanao politika, Dr Ahmad AlRubi'e, ireo bilaogera Koetiana. Maro ireo bilaogera namoaka fiaraha-miory tamin'ny fianakaviany tao ami'ny bilaogin-dry zareo ary ny sasany tamin'ireo nanoratra tamim-pirehetampo fatratra momba ny fifandraisan-dry zareo taminy. I Abdullatif AlOmar no mitondra ny tantara amintsika.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Febroary 2019
Mpiasam-panjakana Rosiana mahazo baiko hi-‘like’ lahatsoratra ao amin'ny media sosialy mampiroborobo ny Oniversiady Ririnina 2019
Eoropa Afovoany & Atsinanana 18 Febroary 2019
Tsy vao sambany ny manampahefanam-panjakana rosiana no natao "olombelonra raboto" hampiroborobo ny tetikasam-panjakana an-tserasera.
Resaka famerenan’i Frantsa ireo asakanto avy aty Afrika
Afrika Mainty 17 Febroary 2019
Avy any Tchad (zavakanto miisa 9.200), Kamerona (7.800) ary Madagasikara (7.500), ny ankamaroan’ireo vakoka Afrikana hita ao amin’ny Mozea Frantsay.
Misy fitsabahana ara-politika ve ao amin'ny tambajotram-pahitalavitra ho an'ny daholobe ao Timor-Leste?
Azia Atsinanana 16 Febroary 2019
Nisy fikasana maromaro hitsabaka ara-politika nanindry tamiko sy tamin'ireo mpanao gazety mivantana mba hitarihan-jotra ny votoatim-baovao.